iPhone 14 သည် eSIM ဖြင့်သာ ရွေးချယ်နိုင်သည် | iPhone သတင်း
eSIM သီးသန့် iPhone 14 သည် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
Apple ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်တွေထဲက တစ်ခုကတော့ သံသယဖြစ်စရာပါပဲ။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ. iPhone သည် conchinchinina ကဲ့သို့ပင်။ တစ်နိုင်ငံမှ တစ်နိုင်ငံသို့ ပြောင်းလဲသွားသော တစ်ခုတည်းသော အရာမှာ ပါဝါအားသွင်းစနစ်ဖြစ်သည်၊ ထင်ရှားသော အကြောင်းပြချက်များကြောင့် ဖြစ်သည်။ အခု သူ မဝတ်တော့ဘူးဆိုတော့ ဒါတောင် မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် လူတိုင်းအတွက် ကော်ဖီသောက်ပါ။
သို့သော် iPhone 14 သို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်အသစ်အဆန်းများထဲမှတစ်ခုသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိထိုစံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်တိုက်ရိုက်တိုက်ဆိုင်သည်။ ဟိ eSIM. လာမည့် iPhone များတွင် eSIM ကို မိတ်ဆက်ပေးလိုသော Apple အတွက် ဆုတ်ယုတ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့် virtual SIM များကို ပံ့ပိုးပေးသည့် မိုဘိုင်းအော်ပရေတာများ မရှိသေးသော နိုင်ငံများလည်း ရှိပါသည်။ ထို ... ဖြစ်မည်?
Apple က နောက်ထွက်ဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ ကောလာဟလတွေ ထွက်နေပါတယ်။ iPhone ကို 14 Apple Watch ကဲ့သို့ အခြားသော LTE စက်များနှင့် ပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်း eSIM နှင့်သာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် မကြာခဏဆိုသလိုပဲ၊ ဖုန်းအော်ပရေတာတွေဟာ စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူတွေရဲ့နောက်မှာ အများကြီးရှိပါတယ်။
Apple က သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး စတင်ရောင်းချချိန်က ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ Apple Watch LTE. စပိန်တွင် ပင်မတယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာများက ၎င်းတို့၏စနစ်များကို virtual eSIM များ စျေးကွက်တင်နိုင်စေရန် လအနည်းငယ်စောင့်ခဲ့ရသည်။ အထူးသဖြင့် Movistar နဲ့ ကြုံခဲ့ရတာပါ။
တယ်လီဖုန်း အော်ပရေတာ ရှိတဲ့ နိုင်ငံတချို့လည်း ရှိပါတယ်။ eSIM ကတ်များကို မရောင်းကြသေးပါ။ virtual အဲဒါကြောင့် ကောလဟာလတွေ တော်တော်များများကို အကဲခတ်လာတဲ့ အကြောင်းတစ်ခုနဲ့ တူပါတယ်။ GlobalDataEmma Mohr-McClune မှ Apple သည် eSIM နှင့်သာ အလုပ်လုပ်မည့် iPhone 14 ကို ရောင်းချရန် စီစဉ်ထားသော်လည်း ၎င်းနှင့်ပတ်သက်၍ သံသယများ ရှိနေကြောင်း ထောက်ပြသည်။
ထို့ကြောင့် Apple သည် virtual SIM များနှင့်သာအလုပ်လုပ်သောထိုကဲ့သို့သောကိရိယာကိုထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဟုသူထင်မြင်ယူဆသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ရွေးချယ်စရာတစ်ခု. wifi သို့မဟုတ် wifi+ဆယ်လူလာ iPad ကို ရွေးချယ်ရန် ရွေးချယ်မှုကဲ့သို့ပင်။ eSIM များကို စျေးကွက်မဖြန့်ရသေးသော နိုင်ငံများတွင် iPhone 14 ကို ပုံမှန် nano-SIM ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သေချာစေပါသည်။
တယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာများက virtual eSIM ကိုကမ်းလှမ်းသည့်နိုင်ငံများ၌၊ အသုံးပြုသူများသည်ယခုကဲ့သို့ iPhone 14 ကိုဝယ်ယူရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ nano-simသို့မဟုတ် eSIM အတွက်သာ ပြင်ဆင်ထားပြီး ကတ်ထည့်သွင်းရန် ပုံမှန်အပေါက်မပါသော တစ်ခု။ ဘယ်လိုအရာတွေ ပြီးဆုံးသွားမလဲဆိုတာကို ကြည့်ရမှာပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » အိုင်ဖုန်းဆိပ်ကမ်းများ » iPhone ကို 14 » eSIM သီးသန့် iPhone 14 သည် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ငါတို့ကို အရူးမခံရအောင်။ AirPods Pro အစစ်နှင့် အတုကြား ကွာခြားချက်အချို့
Podcast 13x17- ကောလာဟလများစွာနှင့် သတင်းအနည်းငယ်